सामाजिक मिडियामा व्यक्तिगत ब्रान्डि There सबैभन्दा बेइमान मार्केटिंग छ | Martech Zone
शनिबार, सेप्टेम्बर 17, 2016 शनिबार, सेप्टेम्बर 17, 2016 Douglas Karr
डाइट र डेटि ads विज्ञापनहरू बिर्सनुहोस्; मलाई लाग्छ कि त्यहाँ केहि सबैभन्दा भ्रामक मार्केटिंग अनलाइन छ धेरै मार्केटिंग विशेषज्ञहरू हुन् जसले ब्राण्डको आलोचना गर्न जारी राख्छ र पारदर्शिता अनलाइन प्रचार गर्दछ।
तिनीहरू पारदर्शी तर केहि छन्।
म मेरो जीवनको एक रमाईलो समयमा छु। मेरो व्यवसाय राम्रो गर्दैछ, मेरो व्यक्तिगत जीवन महान छ, र मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ जुन प्रत्येक बितेको महिनामा। त्यो भनिएको छ, हाम्रो व्यवसाय र मेरो व्यक्तिगत जीवन अझै ठूलो चुनौतीहरू छन्। म ठट्टा गर्छु, अब मैले केहि व्यवसायहरू सुरु गरें जुन म हुँ बेरोजगारी, म कहिल्यै पूर्ण-समय रोजगारमा फर्किने छैन। त्यस कारणले गर्दा, मैले मास्क्रेड गर्न र एक पूर्ण ब्रान्ड अनलाइन राख्नु हुँदैन।
पछिल्लो महिनामा मैले केहि व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ जहाँ उनीहरू मेरो अनलाइन कुराकानी हाईलाइट गर्थे। फेसबुकमा, म राजनीति र धर्मको चर्चा गर्दछु र धेरैको त्रासको लागि बहस गर्छु। मँ उद्योग मा धेरै मान्छेहरु लाई गरेको टिप्पणीहरु को लागी मेरो अनुसरण गर्न को लागी गरीएको छैन वा मैले लेख साझा गरेको छु। मसँग असहमत व्यक्तिहरू मलाई भन्छन् म बन्दुक, भगवान र राजनीतिको बारेमा कुरा गरेर मेरो व्यापारमा चोट पुर्‍याइरहेको छ। व्यक्तिहरू त्यो गर्छन् सहमत हुनुहोस् मसँग चुपचाप मलाई एकपटक तान्नुहोस् र इनपुटको लागि धन्यवाद दिनुहोस् ... यद्यपि तिनीहरू हिम्मत गर्दैनन् वा मैले साझेदारी गरेको कथाहरूमा टिप्पणी गर्ने छैन।
म प्रायः दुबै व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्दछु कि मसँग फरक पाको छु। म रोमन क्याथोलिकमा हुर्कें, तर मेरो आधा परिवार यहूदी छ। मेरो बुबा कट्टर रूढीवादी, अनुभवी, र देशभक्त हुनुहुन्थ्यो… तर मेरो आमा फ्रान्सेली-क्यानाडाई हुनुहुन्थ्यो युरोपियन उदार परिवारसँग। मलाई बोल्न र बहस गर्न प्रोत्साहित गरियो। र वैकल्पिक विचारको लागि सम्मान मेरो परिवारको दुबै पक्ष द्वारा मांग गरिएको थियो।
यो कि त आशिष् वा श्राप थियो। हुर्कदै गर्दा, म आदरपूर्ण टकरावको कहिल्यै डराउँदिन। यसले मलाई हाईस्कूलको समस्यामा पारेको छ। मैले स्नातक गरेपछि, नेवीमा भर्ना भएपछि मलाई अनुशासन र आदर सिकायो। जब म कार्यबलमा सामेल भएँ, म नेताहरू द्वारा संरक्षित थिए जसले स्वायत्तता र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई प्रोत्साहित गरे। यी सबै थप्नुहोस्, र यसले काफी आगोको भुमरी बनाउँछ। त्यो मेरो अनलाइन उपस्थितिमा अनुवाद गरिएको हो।
मेरो बारेमा पर्याप्त। विडंबना, यो धेरै उद्योग नेताहरूको अनौंठो घरपालुवा जनावर हो। तिनीहरूको सिद्ध जीवनको अनन्त साझेदारीले मलाई बोर बनाउँछ।
हुनसक्छ यो हाम्रो विभाजनकारी राजनीतिक वातावरण हो जुन अनलाइन बेइमानीमा थपियो, तर मलाई लाग्छ कि यो डरलाग्दो छ। यो केवल सादा बुलक्र्याप मात्र होईन, तर म यति टाढासम्म जान्छु कि यो दुबै परित्याग र खतरनाक पनि छ। हुनसक्छ तपाईंको धर्म र राजनीति व्यक्तिगत हो र तपाईंले प्रचार गर्न चाहानु भएको कुरा होईन; म त्यसलाई सम्मान गर्न सक्छु। तर के म सम्मान गर्न सक्दिन कि तपाईंको जीवन कत्तिको परिपूर्ण छ र तपाईंको व्यवसाय कती अविश्वसनीय छ भन्ने अनन्त प्रवाह हो।
के तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको व्यक्तिगत र व्यवसायिक बृद्धिमा काम गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, र तपाईले अनलाइन हेर्नुभएको सबै मान्छेहरू अनलाईनमा हेर्दा संघर्ष गरिरहेका छैनन्? मलाई लाग्छ कि यो दुर्बल हुनेछ। म विश्वास गर्दछु म दुबै व्यक्तिगत र प्रोफेशनली यी मानिसहरु मध्ये धेरै भन्दा सफल छु - तर हाम्रो प्रोफाइल अनलाइन तुलना गरेर तपाईले त्यो कहिले पनि थाहा पाउनु हुने छैन। सायद यो किनभने मैले मेरो सफलतालाई कम्तीमा पनि मद्दत गर्ने मान्छेले नापेको कारण मैले मापन गरेको छु।
र केहि अनौंठो कारणको लागि, मेरो ईमानदारी अनलाईन मेरो उद्योगमा धेरैले मेरो व्यक्तिगत ब्रान्डि toको हानिकारकको रूपमा हेरिन्छ। धेरै उद्योग जसले शव्दहरूलाई मनपराउँदछ पारदर्शिता र ईमानदारी। तिनीहरू केहि छन्।
धेरै बर्षहरूमा मैले मेरो उद्योगमा सयौं मानिसहरूलाई नपाएको छु, र त्यहाँ केहि चयनितहरू छन् जुन मसँग संलग्न रहन्छु। तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत, कहिलेकाँही धेरै निजी, मानसिक स्वास्थ्य संघर्षहरू साझा गर्दछन्। तिनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य संघर्ष र रूपान्तरण साझा। र उनीहरूले आफ्नो व्यापार चुनौतीहरू साझा गर्छन्। म तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछु, र उनीहरू मलाई एक राम्रो व्यक्ति, राम्रो नेता, राम्रो बुबा, र एक राम्रो व्यापार व्यक्ति हुनको लागि प्रेरित गर्छन्।
कसरी अझ इमानदार अनलाइन हुने
म आश्चर्यचकित छु कि मैले ती शब्दहरू पनि लेखिरहेको छु, तर म विश्वास गर्दछु ती आवश्यक थिए। यहाँ के म मार्केटिंग नेताहरु लाई आफ्नो अनलाइन उपस्थिति संग के गर्न हेर्न मनपर्दछ:
स्वीकार्नु तिनीहरूको कमजोरी र चुनौतीहरू। हामी सबै उनीहरुसंग छ, र यो प्रेरणादायक छ जब तपाईले आफ्नो व्यक्तिको साझेदारी गर्न व्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ।
सोध्नु सहयोगको लागि। सबैलाई मद्दत चाहिन्छ, तपाईंसँग सबै उत्तरहरू छन् भन्‍ने प्रयास गर्न छोड्नुहोस्।
शेयर स्पटलाइट अधिक। श्रोतासँग र यी प्रभावकारीहरूमा पुग्नको लागि, उनीहरूले अनलाइन ध्यान प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहनेहरूलाई स्वीकार गर्दा यो कत्ति अविश्वसनीय हुन्छ?
प्रेरित गर्नुहोस् अरूले तपाईको कार्यलाई पूरा गर्न सक्दछन्। हामी सबै कठिनाईहरु पार गर्छौं हामी कहाँ छौँ भन्ने बारे साझा गरेर, तपाइँले कसरी साझेदारी गर्नुभयो साझेदारी गर्दा तपाइँले थाहा पाउनु हुन्छ कि तिनीहरूले पनि यो गर्न सक्दछन्।
सामाजिक मिडियाले मानव जडान अनलाइन निर्माण गर्न यो अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ। यहाँ नम्रता, असफलता, रिडिमन र कमजोरी बाहेक अरू केहि छैन, के त्यहाँ छ? मेरो उद्योगमा अरूले गरे जस्तो मसँग धेरै अनुयायीहरू नहुन सक्छ, तर म तपाईंलाई आश्वसन दिन सक्दछु कि मलाई पछ्याउने मानिसहरूसँग मसँग गहिरो सम्बन्ध छ।
अवश्य पनि, म एक नक्कली व्यक्तित्व शिल्प गर्न सक्दछु, केवल हाम्रो व्यापार सफलता साझा गर्न, र अधिक धेरै अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्न। तर म बरु साँचो सम्बन्धहरू बनाउन सक्थें जुन मैले वर्षौंको बखतमा विकास गर्न नसक्ने झूटलाई अगाडि बढाउँदैछु।
टैग: व्यक्तिगत ब्रान्डिङसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
पोडियम: एक केन्द्रीकृत प्लेटफार्ममा समीक्षा संकलन गर्नुहोस् र प्रबन्ध गर्नुहोस्
सेप्टेम्बर 18, 2016 मा 9: 10 AM
म व्यवसायको मालिक होइन, त्यसैले तपाईले भन्नुहुने धेरै कुराहरू मलाई प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुँदैन। र, म सामाजिक सञ्जालमा छैन । (म साथीहरू र परिवारका लागि व्यापारिक लेखहरू लेख्छु, त्यसैले अनुसन्धान गर्दा मैले तपाईंको साइटमा कसरी आएँ।) यद्यपि, मैले तपाईंको लेखलाई साँच्चै रमाइलो गरें - मलाई लाग्दैन कि मैले पहिले यति इमान्दार केही भेटेको छु। एक सफल व्यवसाय मालिकले यसलाई वास्तविक राखेको देख्नु राम्रो छ, त्यसैले धन्यवाद।
सेप्टेम्बर 19, 2016 बेलुका 3:33 बजे
धेरै धेरै धन्यवाद, रीटा!
कपर्निकस जोन केली
सेप्टेम्बर 19, 2016 बेलुका 6:47 बजे
म मानव अनुभव भएको आध्यात्मिक प्राणी हुँ...mmmm। म ...एह मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा बाँच्न मद्दत गर्दछ...जब कि उनीहरूले हामी बढ्दै जाँदा अरूलाई मद्दत गर्छौं भन्ने सुनिश्चित गर्दै।
शानदार लेख ..तर के तपाईं एक कपटी हुनुहुन्छ ... म कसम खान्छु ... एक पप अप बक्सले मलाई त्यहाँ केही सेकेन्ड अघि अभियोग लगाइयो ... त्यसैले ... हो ... सम्मान सहित .. म तपाइँको प्रतिक्रिया हेर्न को लागी प्रतीक्षा गर्नेछु र सायद हामी कुराकानी हुन सक्छ...
सेप्टेम्बर 19, 2016 बेलुका 9:48 बजे
ठीक छ, म पक्का छैन कि पप अप बक्सले मलाई सोशल मिडियामा इमानदार भएर के गर्न सक्छ। कृपया मलाई थाँहा दिनुहोस्।